Dhallinyaro da?dooda ay aad u yartahay oo saxaafadda loo soo bandhigey lana sheegey in lagu soo qab qabtey dagaallada Muqdisho. [Akhris …] – Radio Daljir
Dhallinyaro da?dooda ay aad u yartahay oo saxaafadda loo soo bandhigey lana sheegey in lagu soo qab qabtey dagaallada Muqdisho. [Akhris …]
Muqdisho, July 05- Waxaa maanta xarunta nabad sugiddii hore ee magaalada Muqdisho ay saxaafadda ku tusisey dawladda KMG dhalinyaro shan ah ku waas oo ay sheegtey dawladdu in lagu qab qabtey dagaalladii dhawaantan ka dhacayey magaalada Muqdisho ee Caasimadda ah.
Dhallinyarada oo qeyb ka mid ah qabey dhaawacyo fud fudud ayaa waxaa ay sheegeen in kooxaha ka soo horjeeda dawladda KMG ee Soomaaliya ay u adeegsadeen in ay kula dagaallamaan ciidamada dawladda.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Dawladda oo hadal ka jeediyey madashii la keeney dhallinyada ayaa waxaa uu sheegey in la soo khaldey dhallinyarada isla mar ahaantaana diin loogu soo gabadey waa sida uu hadalka u dhigaye.
Cabdirisaaq Maxamed Qeylow oo ka mid ah saraakiisha Maxkmadaha garabka dawladda taabacsan waxaa uu sheegey in ay jiraan rag kale oo dhallinyaro ah ku waas oo lagu soo qab qabtey dagaalladii dhacay labadii beri ee ugu danbeeyey, waxaana uu sheegey in ay saxaafadda tusin doonaan.
Dhallinyarada ayaa markii danbe iyaga waxaa ay qirteen in lagu qab qabtey dagaalladii dhacayey maalintii la soo dhaafey, waxaana qeyb ka mid ah dhallinyarada maanta saxaaffadda loo soo bandhigey ay da?ooda ay ahayd mid aad u yar.
Dhinaca kalena kooxaha ka soo horjeeda dawladda KMG ayaan illaa iyo iminka aan ka ixin wax jawaab ah arrinta ku aaddan in ay jiraan wax dhallinyaro ah oo looga qabtey dagaalladii dhawaantan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Horey ayaa waxaa loogu eedeeyey kooxda Al Shabaab in ay u adeegsato dhallinyaro da?dooda ay aad u yartahay hab Malleeshiyaadnimo ah iyaga oo khasba in ay tagaan goobaha dagaallada ayna ka qeyb galaan jahaad waa sida ay hadal u dhigaane.
Diiwaanka Wararka Daljir. http://daljir.com/